Admin, Author at Eall Nepal
प्रितम आचार्यले उदीत पछी बलिवूड मा नेपालको नाम राख्दै,सलामान खानको फिल्ममा गीत गाउदै, सुरसालाबाट चर्चामा आएका प्रितम आचार्यले अहिले सारेगमपमा सहभागि भएदेखी चर्चामा आए । उनी त्यतिमा मात्र सिमित रहेनन् उनले सारेगमपमा तेस्रो बिजयी भएर ...
सुनिता दनुवार-एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले मन पराएका केटीहरु बोकेर कोठामा ...
एजेन्सी । बहुचर्चित टेष्ट सिरिज ‘एसेज सिरिज’ अन्तर्गतको पहिलो टेष्टमा अष्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिङ्स खेलेका छन् । इंग्ल्याण्डको एज्बास्टनमा बिहिबार टेष्टको पहिलो इनिङ्समा स्मिथले शतक बनाएका हुन् । स्मिथले १४४ रनको योगदान दिए । यो उनले ...
कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी, साउन १७ । कैलालीमा अज्ञात समूहले जिपमा आगजनी गरेका छन्। गोदावरी नगरपालिका ७ लालपुरका स्थानीय तिलकबहादुर शाहीका जिपमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। घरअगाडि पार्किङ गरी राखेको बा१५च ४०९९ ...
हेलो, तपाईं दीपक हो ? हो, किन ? म जितबहादुर दर्नाल, कतारबाट किन मेरी श्रीमती लानुभा’को ? लगेँ, तँ सक्छस् भने मेरी पनि लगेर देखा । यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा रहेका मोरङ, उर्लाबारी-६, मंगलबारेका ...
बाजुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश
बाजुरा, साउन १७ । लगातारको भारी वर्षाका कारण बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ बसालाको शान्तिटोलमा पहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शान्तिटोलका एकैघरमा आमा र छोरी रहेका छन् । पहिरोमा परेर ३० वर्षीया ...